मृत्युको खील: मृत्यु सबै कुराको अन्त हो?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | मृत्यु सबै कुराको अन्त हो?
मृत्यु कुरा गर्न सजिलो विषय होइन। धेरै जना त यस विषयमा कुरै गर्न रुचाउँदैनन्‌। तर चाँडो वा ढिलो, हामी सबैले यसको सामना गर्नै पर्छ। मृत्युको खीलले नराम्रोसित घोच्छ र यो पीडादायी हुन्छ।
आमा वा बुबाको, पति वा पत्नीको वा आफ्नो बच्चाको मृत्युको लागि हामी कोचाहिं पूरै तयार हुन्छौं र? कसैको अचानक मृत्यु हुन्छ भने कसैले चाहिं लामो समयसम्म यससित सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। अवस्था जस्तोसुकै भए तापनि हामी कोही पनि मृत्युको असरबाट जोगिन सक्दैनौं र यसको असर दर्दनाक हुन्छ।
सडक दुर्घटनामा आफ्नो बुबा गुमाएका आन्टोनियो यसो भन्छन्‌: “यो त कसैले तपाईंको घरमा ताल्चा लगाइदिएर साँचो पनि आफूसँगै लिएर गएजस्तै हो। तपाईं आफ्नो घरभित्र छिर्न समेत सक्नुहुन्न। तपाईंसँग केवल सम्झनाहरू मात्र बाँकी रहन्छन्‌। जीवनमा यो नयाँ मोड तपाईंले स्वीकार्नै पर्छ। एकदमै अन्याय भएजस्तो लागेकोले इन्कार गर्न लाख कोसिस गरे तापनि तपाईं लाचार हुनुहुन्छ।”
सतचालीस वर्षको उमेरमा आफ्नो पति गुमाएकी डोरोथीले पनि मृत्युसम्बन्धी केही प्रश्नको जवाफ पाउने प्रयास गरिन्‌। चर्चले चलाउने आइतबारे स्कूलकी शिक्षिका डोरोथीलाई मृत्यु सबै कुराको अन्त हो जस्तो त कहिल्यै लागेको थिएन। तर अर्कोतर्फ तिनले चित्तबुझ्दो जवाफ पनि पाएकी थिइनन्‌। “मान्छे मरेपछि के हुन्छ?” भनेर तिनले आफ्नो चर्चको पादरीलाई प्रश्न गरिन्‌। पादरीले जवाफमा यसो भने, “यसको जवाफ वास्तवमा कसैलाई थाह छैन। पर्खनु सिवाय अरू केही गर्न सक्दैनौं।”
के हामीसँग “पर्खनु सिवाय” अरू केही उपाय छैन? मृत्यु सबै कुराको अन्त हो कि होइन भनेर थाह पाउने कुनै तरिका छ?
इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने मृत्युमाथि विजयी हुन मानिसले अनेक उपाय गरेका छन्‌। मृत्युमाथि विजयी हुन सम्भव छ?